Ngethuba lokuhlwa kwangeyure kaJanuwari 1, 2003, uBrithy Holmes kunye nesoka lakhe, uRobert Coleman, baphoxela indlela yabo ekhayeni laseYulian Brandon, owayengumhlala-phantsi owayeneminyaka engama-70 ubudala, kunye nomkakhe uAlice, owayengama-68 ubudala ubudala.
UMnumzana Brandon wadutshulwa kwinqanaba lokudibanisa elingaphantsi komhlathi wakhe kunye ne-handgun .380. Inqabana ihlukaniswe ngamacandelwana amabini: iqhekeza elinye langena ebuchosheni kwaye elinye laphuma phezulu kwentloko.
U-Julian Brandon wabuyela ngokukhawuleza.
UHolmes noColman bamthabatha uNksz Brandon ekamelweni lokulala, bafuna iimpahla zakhe ezixabisekileyo, imali kunye namakhadi wesikweletu njengoko wayecela ukuba aphile. Ukungayithobeli intlozo yakhe, bafaka umlotha phezu kobuso bowesifazane bamdubula entloko, bamshiya befile.
Emva kokudubula uNksz Brandon, uHolmes kunye noCleman bamva uMfundisi Brandon elwa neentlungu zakhe waza wabuya waza wahlambalaza wambulala .
Abahlobo abaxhalabelekileyo bafumanise amaBhunga
NgoJanuwari 5, 2003, iintsuku ezine emva kokuhlaselwa, uCalvin Barrett Hudson, umhlobo weentsapho zeBronsons, waxhalaba xa isibini esingazange siye kwicawa ngeCawa kwaye sagqiba ukuyijonga. Xa yena nomkakhe behlala kwindawo yabahlobo babo, bamfumana uMfundisi Brandon elele echibini lakhe egazini. U-Hudson waya kwindlu yommelwane waza wabiza iofisi ye-sheriff.
Xa amapolisa ayiphendula kule fowuni, afumana isidumbu sikaReverend Brandon.
Kwakungekho kwada kwafika abaphathi ukuba bahlole indlu abayifumene noMnu Brandon yayingasaphila. Nangona uNksz Brandon wathola inxeba yokubhokoxa entloko, wasinda ekuhlaselweni, nangona wayekhubazekile ngokuzeleyo kwaye ufuna ukunakekelwa kwe-clock-clock.
Iingcebiso zabaPhambili abaPhezulu kwiNkundla yoMbulali
Emva kokuba iindaba zethelevishini zibikwe ulwaphulo-mthetho, i-Ofisi ye-Caddo Parish Sheriff yafumana isipho kubantu abahlala kwipropati esecaleni kwecala lolwaphulo-mthetho.
Abafowunela babonisa ukuba uHolmes wayeziqhayisa ngokubulala umfana osekhulile phantsi kwendlela ecaleni kwecawa kwaye wayezama ukuthengisa iimpahla zazo. Abaphengululi bahamba baya kwi-trailer kaBrenda Bruce, unina kaHolmes, eyayisecaleni lokubulala. Apho bahlala eHolmes, uColman, nonina kunye nomzalwana wakhe oneminyaka eli-15 ubudala, uSean George. Bonke bobabini bavumelana ukuba bahambe kunye namagosa kwiofisi ye-sheriff yokudliwano-ndlebe.
Kwiintsuku ezimbini ezilandelayo u-Holmes wenza izitatimende ezintandathu ezibhalwe phantsi nezingenakulungiswa, ezizibandakanya yena kunye nabanye kumagangatho athile ekubulaleni nasekuphanga. Kwakhona wathi ezimbini iintsuku emva kokubulala, yena kunye namantombazana akhe amabini ahamba ngebhayisikili kwikhaya likaBronsons. Umntakwabo omncinane, oneminyaka engama-9 ubudala, wangena ekhaya kunye naye waza waya ngasemva kwendlu waza waziva ukuphefumula kukaMnu. Brandon waza waphenduka wahamba.
Umntakwabo oneminyaka esithoba ubudala wangena ekhaya kunye nonina, apho wabona uMfundisi Brandon elele echibini legazi waza wezwa uNksz Brandon ekhala kwelinye igumbi ekhaya. Ummelwane washumayela bobabini abazalwana ababalekela kwindawo yokuhlala, beshiya iHolmes ngaphakathi kwindlu.
Amapolisa afumana ubungqina obuninzi obubonisa ukuba u-Holmes wayebandakanyeka kulwaphulo-mthetho.
Nangona isibhamu esasetyenziselwa ukudubula asizange siphumelele, ubungqina be-ballistics babonisa ukuba isikhali esasetyenziswa ekubulaweni kukaBrandon sasisisixhobo esifanayo esise-Horses sikaTolmes kwaye sasebiwe ehlala eTylertown, eMisissippi. U-Holmes uvume ukuba wayebibile isibhamu sikayise kwenye yeengxelo zakhe zamapolisa. Ukongeza, i-video yokubheka i-Hibernia Bank ibonisa iHolmes neCleman ezama ukusebenzisa ikhadi le-credit card likaBronson kwi-ATM.
Ukukhangela i-trailer yaseBruce apho iiHolmes kunye neCleman zihlala zikhokelela ekufumaneni izinto ezininzi ezazingeNksk Brandon. Ezi zintathu zaxoshwa .380 iifowuni zeekhokriji zafunyanwa emanzini emvula yesolayile apho ayehlala khona. Uhlalutyo lweLebhu luye lwabonisa ukuba i-DNA yoMfundisi Brandon ifunyenwe kwenye yezo zinto.
Ukongezelela, uhlalutyo lobunzima lwangqinelana ne-.380 projectile efunyenwe ebuchosheni bukaMfundisi uBrandon kunye nesigumbi sokudlela kwisipilisi esiyifumene emthini kwikhaya likayise kaHolmes eMississippi.
UBrithy Holmes ufunyaniswe enetyala lokubulala ngokutsha kunye nokugwetywa ukufa.
Yayiyini iHorde Horde?
Iintlobo ezininzi zeeMephu zokuHlanywa
Iphrofayili yePower Ballad, ifom yeFomenti ye-80s ebalulekileyo
Ulwaphulo-ngokulwa noLwaphulo lwe-Sugar uRayard's Career